Ikhuphe ingxelo entsha yeSupertuxkart 1.0 yazi iindaba zayo | Ubunlog
Emva konyaka onesiqingatha wophuhliso, se ivelise ukumiliselwa kwenguqulelo entsha yeSupertuxkart 1.0, eza kunye nokuphuculwa konxibelelwano okuninzi kunye nokulungiswa okuninzi.
Kulungiselelwe abo bangayazi i-Supertuxkart, kufuneka bayazi loo nto lo ngumdlalo wokubaleka osimahla ngeekariti ezininzi kunye neengoma.
Ngaphandle koko, iza nabalinganiswa abavela kwiiprojekthi ezahlukeneyo zomthombo ovulekileyo ezibandakanya iingoma ezininzi zomdyarho. Ngaphambili ibingumdlali omnye okanye umdlalo wabadlali abaninzi wasekhaya, kodwa ngale nguqulo intsha izinto ziyatshintsha.
Ikhowudi yomdlalo isasazwa phantsi kwelayisensi ye-GPLv3. Ukwakha okubini kuyafumaneka kwiLinux, Android, Windows kunye neMacOS.
Abaphuhlisi bayavuma ukuba iSuperTuxKart 1.0 ayifezekanga. Kukho iindawo ezinokuphuculwa. Nangona kunjalo, iSuperTuxKart 1.0 yenye yezona zinto zibalulekileyo ezikhutshiweyo kwimbali yeminyaka eli-12 yeprojekthi.
Nangona isebe le-0.10 lalisaphuhliswa, abathathi-nxaxheba beprojekthi bagqibe kwelokuba bapapashe inguqulelo 1.0 ngenxa yokubaluleka kotshintsho.
1 Iimpawu ezintsha zeSupertuxkart 1.0
3 Uyifaka njani i-SuperTuxKart kwi-Ubuntu nakwiziphumo?
Iimpawu ezintsha zeSupertuxkart 1.0
Con ukukhutshwa kwale nguqulo yeSupertuxkart 1.0, amanqaku aphezulu njengenye yeenoveli eziphambili Inkxaso yokubaleka kwi-Intanethi Ngaphezulu kwenethiwekhi yomhlaba, ekuvumela ukuba ukhuphisane nabanye abantu naphina emhlabeni (ngaphambili yayixhasa kuphela imidlalo ngeebhot, iscreen, okanye inethiwekhi yendawo).
Ukudlala kakuhle, Kuyacetyiswa ukunxibelelana neeseva ezingagqithiyo kwi-100 ms ping kwaye akukho lahleko yepakethe.
Ukongeza ekunxibelelaneni neeseva ezikhoyo kunye nokuthatha inxaxheba kuluhlu ngokubanzi, Nabani na oyifunayo unokuyiqala ngokulula eyakhe iseva Ukukhetha ukhetho 'Yenza iServer' kwi-GUI (kwiseva, ukusebenza kweRaspberry Pi 3 kwanele).
Malunga neIiKarts, ezi zihlaziyiwe kwaye iimpawu zazo zalungelelaniswa kwakhona (ubudlelwane phakathi kwesantya, ubunzima, amandla, ukuqhuba kunye nolawulo).
Umsebenzisi unokuphucula ezinye iiparameter ngenxa yokonakala kwabanye, yiyo loo nto enze imephu yokhetho efanelekileyo kwindlela ekhethiweyo.
Ujongano lomzobo lomsebenzisi luhlaziyiwe, iithebhu ezithe nkqo zisetyenziselwa ukulawula useto, imiyalezo ebhaliweyo iguqulwe, isantya somatshini siguqulwe kakhulu.
Umjikelo weSakhiwo esidala (umdyarho wamabhotwe asezidolophini) uthathelwe indawo yiRavenbridge Mansion Circuit.
Okokugqibela olunye utshintsho olukhankanyiweyo yingoma entsha eyongeziweyo "Ihlathi elimnyama" (ubuhlanga kwiindlela zehlathi).
Ngaphambi kokufaka iSuperTuxKart, Kufuneka uqiniseke ukuba uhlangabezana neemfuno zomdlalo.
Nazi ezinye zeemfuno ezibalulekileyo zekhompyutha ekufuneka uyifezekisile ngaphambi kokufaka iSuperTuxKart:
Iadaptha yemizobo ubuncinci i-512 MB VRAM
Ukuze ube nakho ukonwabela le nguqulo intsha Indawo yokugcina kufuneka yongezwe, inokongezwa kulo naluphi na ulwabiwo olusekwe ku-Ubuntu nokuba yiLinux Mint, Kubuntu, Zorin OS, njl.
Nokuba indawo yokugcina sele inenkxaso yenguqulo entsha ye-Ubuntu 19.04 Disco Dingo!
Ukuba ufuna ukususa lo mdlalo ngenxa yokuba ibingeyonto ubuyilindele okanye nangasiphi na isizathu. Ukukhubaza okanye ukususa iPPA Inkqubo, kufuneka bavule i-terminal kwaye benze lo myalelo ulandelayo:
Kwaye ekugqibeleni Singashenxisa usetyenziso kunye nazo zonke iifayile eziveliswe yile:
Umendo opheleleyo kwinqaku: ubunlog » Ubuntu » Imidlalo » Ikhuphe ingxelo entsha yeSupertuxkart 1.0 yazi iindaba zayo
Bug? Ubuntu 19.04 kuthintela ukurhuqa iifayile zisuka / ziye kwi desktop